Barcelona Oo Real Madrid Ka Dul Qaadaysa Saxiixa Difaaca Ateltico Madrid Ee Theo Hernández - Wargane News
Home Sports Barcelona Oo Real Madrid Ka Dul Qaadaysa Saxiixa Difaaca Ateltico Madrid Ee...
Barcelona Oo Real Madrid Ka Dul Qaadaysa Saxiixa Difaaca Ateltico Madrid Ee Theo Hernández
Barcelona ayaa difaaca kooxda Atletico Madrid ee Theo Hernandez ka gudbisay dalab la mid ah kii ay Real Madrid xidigan ku doonaysay, waxayna labada kooxood ee Spain ugu waa wayni si toos ah ugu dagaalamayaan saxiixa Theo Hernández oo qaab ciyaareed cajiib ah ku soo bandhigay kooxda Alaves oo uu heshiis amaah ah kula joogo.
Real Madrid ayaa heshiis hordhac ah la sii gaadhay Theo Hernandez laakiin Barcelona ayaa doonaysa in ay ka faa’iidaysato colaada wayn ee u dhexaysa Real Madrid iyo Atletico Madrid basle sidoo kale wakiilka Theo Hernandez ayaa door bidiya in xidiga uu wakiilka ka yahay uu qayb ka noqdo kooxda Camp Nou ka dhisan.
Real Madrid ayaa intii ayna Barcelona dalabkan gudbin diyaar u ahayd in ay bixiso lacagta heshiiska Theo Hernandez lagu burburin karo taas oo ah 24 milyan oo euros. Sida uu wargayska AS sheegay Theo Hernandez ayaa haddaba heshiis la gaadhay Real Madrid isaga oo la doonayay in uu saxiixo heshiis qaali ah oo uu muddo shan sano ah ku joogayo Bernabeu isaga oo la qorsheeyay in xili ciyaareedka 2017/18 uu mushaar ahaan uqaadan doono 6 milyan oo euros halka xili cyaareedka 2018/19 uu qaadan karo 7 milyan iyada oo ugu danbayn uu mushaarkiisu xili ciyaareedka 2021/2022 uu gaadhi karo ilaa 9 milyan oo euros.
Heshiiska ay Barcelona u soo bandhigtay Theo Hernandez ayaa dhaqaale ahaan ka hooseeya mushaarka uu ka heli karo Real Madrid muddada shanta sanadood ah ee uu sii ogolaaday in uu heshiiskan u saxiixo balse in Barcelona dalab ka soo gudbisay ayaa maskaxdiisa badashay iyada oo waliba wakiilkiisa Manuel García Quilón oo xidhiidh xun la leh Florentino Perez uu door bidiyo in Theo uu ku biiro Barcelona.
Wakiilka Theo Hernandez ee Manuel García Quilón ayay Florentino Perez ku coloobeen qaabkii loola dhaqmay Rafael Bentez oo uu wakiil ka ahaa kaas oo shaqada Real Madrid laga caydhiyay iyada oo aanu xili ciyaareedkiisii ugu horeeyay dhamaad ku dhawayn. Laakiin sidoo kale maamulka Atletico Madrid ayaa doonaya in haddiiba ay waayayaan adeega Theo Hernandez in ayna ka iibin Real Madrid oo ay Barcelona ka iibiyaan.
Xiisaha Barcelona ee Theo ma aha amid cusub waxayna isku dayeen xagaagii hore taas oo keentay in Ateltico Madrid ay si deg deg ah uga falcelisay waxayna xidgian ka saxiixatay heshiis cusub oo ay sare ugu qaaday lacagta lagu burburin karo oo markaas ahayd 6 milyan oo eruos oo kaliya waxaana laga dhigay 24 milyan oo euros waana lacagta ay hadda kooxaha Barcelona iyo Real Madrid diyaarka u yihiin in ay bixiyaan.